Waterloo, IA • Fanorana amin'ny vatan'ny nofo sy ny NuRu
Fandriho ny vatanao sy ny fanotra nuru ao Waterloo, IA.
Waterloo dia tanàna ao amin'ny distrikan'i Black Hawk County, Iowa, Etazonia. Tamin'ny fanisam-bahoaka tany Etazonia tamin'ny taona 2010 dia nihena 0.5% ny mponina hatramin'ny 68,406; ny fanisam-bahoaka tamin'ny taona 2014 dia nanombana ny 68,364 ny mponina, ka izy io no tanàna fahenina lehibe indrindra amin'ny fanjakana. Mamandrika ny fikosoham-batana sy fanorana nuru any Waterloo, IA.